अस्मिता न्यौपाने, (अनारमनी, झापा)
घर फर्केको तेस्रो दिन आज । यात्राको थकान मेटिएकै थिएन । सोचेँ 'ब्यागको सबै लुगा दराजमा मिलाएर राख्नु पर्यो ।' दराज सफा गरेर ब्याग खोलेँ । लुगा मिलाउन थालेँ । एक्कासि बितेका दिनका सम्झनाहरु दिमागमा बादलझैँ मडारिन थाले । आँखाबाट आँसु दर्केला जस्तो भयो । फेरि गड्याङगुडुङबाट तर्किएको पानीझैँ आएन आँसु । रोकियो गहमै ।
प्यारालाइसिसबाट पीडित मेरा पिताजीले भन्नु भएको थियो 'हाम्रा बुबाको भोटो र जाँघे सिलाउने दर्जी साइँलाको कान्छो छोरो छिमेकी भएर आ'को छ के कस्तो छ जाओ न हौ त्याँ ।' म गएको थिएँ पिताजीको आज्ञा मानेर दर्जी कान्छादाइको घर पहिलोपटक । जानेबित्तिकै भाउजूले 'पिरा दे है ठूली' भन्दै छोरीलाई भनेकी थिइन् । ठूलीले मेरो छेउमा ल्याएर सुकुल ओछ्याएकी थिई । म बस्दै गर्दा ठूलीले एक कदम अघि बढेर सोधेकी थिई तपाईंको घर कुन हो मैले औँलाले 'ऊ त्यो' भनेको थिएँ त्यो बेला । उसले फेरि 'छिमेकी पो भइएछ' भनेकी थिई ।
साँच्चै आहिस लाग्दो जोडी थियो दर्जी कान्छादाइको । रक्सी नपिएको दिन कान्छा दाइ भाउजूलाई नपिटी छाड्दैन थिए । भाउजू रुँदिन थिइन् पिटेको बेला । जब कान्छा दाइले रक्सी पिउँथे अनि रुन्थिन् । कान्छादाइ त्यतिबेला भाउजूको काखमा क्वाँक्वाँ रुँदै भन्थे 'मैले तँलाई माया गर्नै जानिनँ तँ मलाई कति माया गर्छेस् ।' मलाई भने अचम्म लाग्थ्यो उनीहरुको चाला देखेर । कान्छादाइलाई रक्सी पिएपछि मात्र भाउजूको माया गर्न आउँथ्यो । भाउजूलाई पनि दाइले रक्सी पिएपछि मात्र रुन आउँथ्यो । पछि रक्सीकै कारण मरे कान्छादाइ । खै त्यति धेरै त याद छैन त्यस्तै ६/७ महिनाको अन्तरमा भाउजु पनि उतै गइन् । घरमा बाँकी थिए तीन सन्तान ठूली उसकी बहिनी सानी र भाइ । सानी सानैदेखि मावलमा पढ्थी । भाइ र ठूली घरमा थिए ।
छिमेकीहरुमध्ये त्यो घरसँग मेरो गहिरो आत्मीयता थियो । म त्यो घरमा दिनमा एक पटक नगई सक्दिन थिएँ । दाइ-भाउजूको निधनपछि टुहुरो बनेको थियो त्यो घर । ठूलीका दिनहरु रोएरै बितेका थिए कति त । भाइ सानो थियो । बुझ्दैन थियो दिदी रुनुको कारण । रोइदिन्थ्यो दिदीसँगै । अनि भन्थ्यो तोते बोलीमा 'मेलो दिदी किन पितिस्' कति सम्झाउँथे म ठूलीलाई तर आफैँ भक्कानिन्थ्यो ।
एउटा कुरोले मलाई अति नै छुन्थ्यो त्यो के भने ठूली र म एकअर्कालाई तँ भनेर बोलाउँथ्यौँ । 'तपाइ' भन्थी सुरुसुरु त । पछि खै कहिलेदेखि 'पाईं' हराएछ । बाँकी रहेछ 'तँ'मात्र । सायद आत्मीयता बढ्दै गएपछि होला । म भन्दा तीन/चार वर्ष कान्छी हुँदी हो ठूली । खै नाम पनि कहिले सोधिएन । गाउँभरिका सबैले ठूली भन्थे । र म पनि । न मेरो नाम थाहा थियो उसलाई । खुस पर्दा काले दाइ भन्थी रिसाइ भने मेरो पातलो शरीरको उपहास गर्दै 'लिखुरे' भन्थी । म नि कम थिइनँ हाँसीहाँसी 'हारमोनियम देखेकी छौ?' भनी सोध्थेँ । ऊ छु भन्थी । म उसलाई 'हो त्यसको रिट जस्तै छ तिम्रो दाँत त्यसबाट कति मिठो धून निस्कन्छ हगि भन्थेँ । ऊ 'अँ' भन्थी अनि उकासेर गीत गाउन लाउँथे । गाउँथी
"पोहोर साल खुसी फाट्यो
जतन गरी मनले टालेँ …।"
साँच्चै मीठो गीत गाउँथी ठूली । पछिपछि थाहा पाइछ हारमोनियमको रिटजस्ता दाँतको खास अर्थ । रिसाएर भन्थी 'काले-लिखुरे काले-लिखुरे …' म पनि हत्तपत्त पैँचो तिरिहाल्थेँ 'हारमुनी हारमुनी…। ।' रिसाएजस्तो मात्र गर्थी, रिसाउँदिन थिई । साँच्चै रिसाउँथी भने मसँग नबोल्दा पनि त हुन्थ्यो नि !
दुःखहरु भुल्दै गइरहेकी थिई । भाइ अनाथ आश्रमलाई लगेर दिई क्यारे ! ऊ एक्लै बस्थी दिनभरि गाउँलेहरुका लुगाफाटा सिउँदै । म पनि विदेश जाने तर्खरमा थिएँ । चंचले ठूली निकै गम्भीर हुँदैथी ती दिनहरुमा ।
एकदिन लुगा सिउँदै गर्दा पुगेको थिएँ । ठूली भन्दै थिई 'काले दाइ विदेश जान लागेको छस् रे हो?' वास्तवमा म त्यो दिन ठूलीलाई भोलि काठमाडौँ र तीन दिनपछि विदेश जाँदैछु भन्नलाई गएको थिएँ । उसले रातो सर्ट दिएकी थिई उबेला । भन्दै थिई 'यो तेरो लागि मैले सिलाइ दिएकी ।' मैले लिन आनाकानी गरिरहँदा उसले गहभरि आँसु पारेर एउटा चिनो त लैजा भनेकी थिई । 'रोइ'-'रोइ'-'रोइ' भनेर जिस्काएको थिएँ । ऊ कसो मुस्कुराइन ।
मैले हिँड्ने बेला 'बिहे चाहिँ नगर्नु नि !' भनेको थिएँ । उसले लजाउँदै 'अँ लिखुरे तँ नभई मेरो बिहे हुन्छ त?' भनेकी थिई । खै त्यसको भाव मैले बुझेँ या बुझिनँ । मैले बुझे जति सही थियो या गलत ! घरसम्म पुर् याउन आएकी ठूलीलाई मैले भनेको थिएँ 'अब फर्केर आएपछि मलाई काले-लिखुरे नभन्नू म विदेशबाट फर्कदा गोरो र मोटो भएर आउँछु ।' उसले हुन्छ भन्दै टाउको हल्लाएकी थिई र भन्दै थिई 'मेरो दाँत पछि पनि यस्तै नै हुन्छ तर हारमुनी चैँ नभन है ।' मैले 'ल-ल' भन्दै प्रतिबद्धता जनाउँदै हामी छुट्टिएका थियौँ त्यो दिन ।
विदेश पुगेको दिन घरमा फोन गरेको थिएँ दिदीले उठाएकी थिई । मैले आफू सकुशल आइपुगेको खबर सुनाएँ र सोधेँ घर परिवार गाउँघरको खबर-खाबर । ठूलीले घरको बलोमा आफूलाई झुण्ड्याएकी खबर दिदीले सुनाई । टेकेको भुइँ दबिएझैँ आकाशले थिचे झैँ भारी महसुस भयो । 'किन झुण्ड्याई' भन्ने प्रश्नमा कुनै अर्थ भेट्टाइनँ । मलाई थाहा थियो मरेको मान्छे बोल्दैन । अरुले आफ्नो मनको कुरा भन्छन् । मर्नुको कारण त मर्नेलाई नै थाहा हुन्छ । निरास भएर फोन राखेँ । निकैबेर रोएँ त्यो दिन म ठूलीलाई सम्झेर ।
तीन वर्ष परदेशमा बिताएर घर फर्केको । जाने बेलामा दिएको चिनो रातो सर्ट उस्तै छ । थाहा छैन खै कहिले नापै नलिई कसरी सिलाएकी थिई चट्ट जिउमा मिल्ने खालको । भनेकी थिई 'कालो-कालो छस् रातोले राम्रो सुहाउँछ ।' आज दराजमा कपडा मिलाउँदै गर्दा फेरि उसको सम्झना ल्याएकॊ छ यो सर्टले । विदेशबाट फर्कदा पनि नफेरिएको कालो वर्ण र मासु नलागेको खिनौटो ज्यान देखेर सायद बाँचेकी भए एक पटक भन्ने थिई होली 'काले-लिखुरे ।'
घरमा भात खाएर थालैमा हात चुठ्ने बानी परेको मलाई के थाहा अरुको थाल माझ्दा कस्तो हुन्छ हुन्छ । आखिर त्यो पनि थाहा पाएँ विदेशमा । लुगाको खातमा अलग परिचय र अस्तित्व बोकेका सर्टलाई दराजमा राख्नुपूर्व चुमें एकफेर । अनि मनलाई सान्त्वना दिँदै लेखेँ 'रातो सर्ट' ।
tapai sachchikai sundar katha lekhak hunuhun6 ashmita jee....
well done....keep it up &; thumps up !
malai ta youko poem dherai ramro lagyo asmita g. yastai yastai tpaika harek pailahru agadi badhdai jaun(asmita g tapail aru lekha haru pni padhna pau) &; 2067 salko bada dasaiko subhakamana la yo pardesiko tarf bat ........thank you!!!!!!!!!!!!
ekdum ramro lagyo ,,,,,,,,,,,,,,,,ramro lekhnu bha raicha,,,,,,,,,